Mawiricheya Akajairwa - Akajairika Kurema Wiricheya | Karman Healthcare
musha / Chinyorwa Wiricheya / Mawiricheya akajairwa
Chero Chigaro Saizi16 "Chigaro18 "Chigaro
Chero Chigadzirwa Kurema19.1 makirogiramu - 25 lbs25.1 makirogiramu - 35 lbs35.1 lbs kana zvimwe
Wiricheya Yakatarisana neWireweight Wiricheya
Easy kupeta Kurema Kurema Wiricheya
Kana iwe uchitsvaga yakajairwa wiricheya ine yakasimba uye yakasimba furemu, tarisa kune edu akajairwa mawiricheya. Mazhinji enzira dzekugara dzakavakirwa neNylon yakadzikira 6/6 GF 15% kana pamusoro pechizvino zvigaro zvine hupfumi.
Mawiricheya edu anouya nemazhinji akasiyana anowedzera pazvinhu, kusanganisira sarudzo uye zvishongedzo iyo inogutsa zvaunoda. Zvigaro zvakajairika zvakagadzirwa nesimbi simbi. Standard mawiricheya ma wheelchair ndiwo anonyanya kushandiswa mawiricheya mumusika wanhasi. Wemawiricheya akaenzana anorema anopfuura 35 lbs. vasina kumbomira kwepamberi, vane chigaro hupamhi nekudzika pakati pegumi nematanhatu nemasendimita makumi maviri, uye vakagadzika kana kutsiga maoko.
Kusarudza yakakodzera Standard Kurema Wiricheya?
Kusarudza wiricheya yakajairwa kunonyanya kusarudzwa kana mushandisi achange achishandisa sachigaro achiyera zvavanoda ipapo, kusanganisira zviitwa zvehupenyu, huwandu hwenguva pazuva zuva nezuva iro chigaro chishandiswe, nemamiriro uye maitiro ehurongwa hwavo.
Mamiriro akasiyana anogona kutaurira mhando yewiricheya yauchazoda, zvinoenderana nezvinodiwa uye nhanho yekufamba. Vashandisi venguva yakazara vewiricheya vangangoda imwe mhando yewiricheya pane vashandisi venguva, zvichienderana nemabasa ezuva nezuva uye sarudzo yemararamiro.
Tine akanakisa mwero mawiricheya pamusika. Unogona kutenga zvisingaremi kupeta mawiricheya kubva kune anotungamira anogadzira wiricheya munyika. Isu tinopawo ultra lightweight mawiricheya izvo zviri nyore kupeta nekuchengetedza. Mawiricheya emwenje kazhinji anogadzirwa kubva kualuminium asi dzimwe nguva kubva kusimbi kana musanganiswa wesimbi dzese, zvinova zvakaenzana nehuremu hwazvo hwakaenzana.
Chiedza Wiricheya muchikamu ichi kazhinji zvinorema kubva pa29 - 34 lbs. Tine mawiricheya akawanda atinosarudza kubva mune ino nhanho uye pazasi pe 29 lbs zvakare mukati meiyo Ultralight uremu wiricheya chikamu. Kana zvirizvo lightweight urikutsvaga, bvunza nezve yedu nyowani 14.5 lb furemu ERGO KUTiza.
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru, mhando, misiyano ye zvisingaremi kupeta mawiricheya kusarudza kubva. Tine sarudzo hombe yemawiricheya emawoko, kusanganisira zvisingaremi kutakura mawiricheya, mawiricheya akajairwa, asina kurema mawiricheya, ultralightweight wheelchair, ergonomic mawiricheya uye zvakawanda. Kusarudza chikamu, modhi, kara kana kunyange mutengo poindi kwakakosha kune wekupedzisira mushandisi kunyatsonzwisisa "mamiriro eunyanzvi" zvigadzirwa zvekufamba. Takazvipira kukutsvagira chigaro chakanakira kushandiswa kwehupenyu hwako mukunyaradza, kufamba uye nemakwikwi sarudzo. Isu kuKarman tiri pano uye takazvipira kune zvamunoda zvese.
Kupeta Wiricheya Yakareruka haina kumbobvira iri nyore!
Ose mawiricheya anouya neanobata anobata akajairwa. Mazhinji anowanikwa se16 ″ kana 18 ″ chigaro upamhi. Zviri nyore kufamba pamusoro pewiricheya ramp. Mazhinji macheya ane dhesiki-kureba armrest mapedhi. Mimwe mienzaniso yemawiricheya ine mafirifi ekumashure anoita kuti kutakura cheya kuve nyore zvikuru kunyanya mudhiramu remota kana chero imwe nzvimbo yekuchengetera. Swing-away detachable gumbo zororo rinopawo dzimwe nzira dzekufamba uye nyore kushandisa. Bariatric mawiricheya kana inorema basa mamodheru. Bvunza nezve edu anoshanduka kana mushonga unobva kuBariatric kana iyo KM-8520F20 uye KM-8520F22 isingakwanise chero chaicho chaunoda iwe kana kutarisa chedu BT-10 muenzaniso.
Iwe unogona kuziva zvimwe nezve edu anotakurika asingaremi mawiricheya kubva kune edu zvigadzirwa zvinyorwa, kusanganisira iyi flyer:
Ko Standard Manual Wheelchair ndiyo Inonyanya Kukosha?
Ma wheelchair akajairwa ndiwo akakosha uye ekupinda nhanho. Mazhinji anogadzirwa nesimbi yakaoma pane panzvimbo yesimbi dzakareruka. Mhando idzo iwe dzaunogona kusarudza kubva pakutanga kubva kune yekutanga kusvika pafiripi kumashure armrest kana kureba kwedhesiki kuti uchinjise uye upinde nekubuda wakasununguka. PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawicheya emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo yakareruka kupfuura yakasununguka wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: